कसैले थर्काएर डराउँदैनौं,वार्ता गर्न काठमाडौं ल्याउनु: प्रधानमन्त्री::Pathivara News
कसैले थर्काएर डराउँदैनौं,वार्ता गर्न काठमाडौं ल्याउनु: प्रधानमन्त्री
जुम्लामा १८ दिनदेखि अनशनरत डा.गोविन्द केसीका मागबारे मंगलबार पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेन । सरकारी टोलीले पहिला डा।केसीलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अडान राखेपछि मागमा छलफलै हुन नसकेको डा. केसीका प्रतिनिधिले बताए । सोमबार र मंगलबारको अनौपचारिक वार्तापछि सरकार पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
जुम्लामा १८ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागबारे मंगलबार पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेन । सरकारी टोलीले पहिला डा।केसीलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अडान राखेपछि मागमा छलफलै हुन नसकेको डा। केसीका प्रतिनिधिले बताए। सोमबार र मंगलबारको अनौपचारिक वार्तापछि सरकार पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
‘बिहान ९ बजेदेखि सरकारी पक्षसँग बस्दा पनि वार्ताको न्यूनतम वातावरण बन्न सकेन,’ छलफलमा संलग्न डा।अभिषेकराज सिंहले भने, ‘सरकारले पेलेर जाने रणनीति लिएजस्तो छ ।’ सरकारी पक्षले डा। केसीलाई उपचारका लागि काठमाडौं नल्याएसम्म कुनै कुरा नगर्ने अडान लिएको उनले बताए ।
दुई–चार महिनामै समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकाले धैर्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘चुनाव अघिको सरकारले देशमा जथाभावी गरेकाले त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन समय लागेको छ। विरोधीले सरकारविरुद्ध अफवाह फैलाएकाले त्यसको प्रतिवाद गर्न उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।आजको कान्तिपुरमा खवर छ ।